Home TOROHEVITRA FOTSORATRA TSY MISY MPANJAKA Mpilalao Football English Demarai Grey Childhood Story Plus Untold Biography facts
Ny LB dia manolotra ny tantara feno momba ny "football genius" izay fantatra amin'ny anarana hoe "Gray". Ny tantaram-pitiavantsika Demarai Gray momba ny tantaram-pitiavana sy ny tantaram-piainana tsy fantatra dia mitondra fitantarana feno momba ny hetsika mahavariana avy amin'ny fotoanany hatramin'ny fahazazany. Ny fanadihadihana dia ny fiainany teo aloha, ny fiainam-pianakaviana, ny tantaram-piainana talohan'ny laza, ny fiantsoana tantara, ny fifandraisana ary ny fiainana manokana sns.
Eny, fantatry ny rehetra momba ny dabilio sy ny fisainany ary ny teknika izay mahatonga azy ho iray amin'ireo mpilalao baolina kitra haingana indrindra any Angletera. Na izany aza, vitsivitsy ihany no mandinika ny biography of Demarai Gray izay tena mahaliana. Ankehitriny tsy misy ado, aleo atomboka.
Demarai Grey Childhood Story Plus Untold Biography Facts- Fiainana tany am-piandohana sy fianakaviana
Demarai Remelle Gray dia teraka tamin'ny Andro 28 tamin'ny 1996 Birmingham, Angletera. Gray no niandohany Jamaica misaotra ny ray aman-dreniny izay manana fototra Jamaikana. Midika izany fa toy ny tamin'ny fotoana nanoratana azy dia mbola afaka ny hilalao an'i Jamaika.
Demarai Grey dia avy amin'ny saranga antonony any am-piandohana miaraka amin'ny kolontsaina Britanika Jamaikana izay tsy dia misy fahasamihafana amin'ny zavatra hitan'ny jamaican britanika toy ny; Daniel Sturridge, Theo Walcott, Alex Oxlade-Chamberlain, Raheem Sterling, Kyle Walker, Danny Rose ary Chris Smalling.
Anabavy Gray - Credit to Twitter
Rehefa nihalehibe niaraka tamin'ny rahavaviny i Gray, dia nanatrika ny sekolin'i Frankley High School i Grey ka nanomboka nilalao baolina fifaninanana izy nandritry ny ora fiasan'ny sekoly. Ny fanaovana baolina tany am-boalohany dia nandoa ny lanjan'ny dividends raha nitarika tamina asa iray.
Demarai Grey Childhood Story Plus Untold Biography Facts- Ny fiainam-piarahamonina tany am-piandohana
Talohan'ny nahaterahany niaraka tamin'ny Frankley High School, dia nanomboka nilalao tamin'ny ekipan'ny tanora ao an-tanàna i Demarai Gray, ekipa junior any Cadbury Athletic. Nanao fahagagana niaraka tamin'ny klioba izy izay nahatonga azy hahazo ny vatsim-pianarana niaraka tamin'ny Birmingham Academy.
Grey dia nanatevin-daharana ny akademia Blues ho ambany-11. Teo am-piandohana dia nihaona izy ary lasa mpinamana Nathan Redmond izay noheveriny ho fitaovana goavana indrindra tamin'ny asa tanorany.
Demarai Grey ny fisakaizan'ny mpinamana tamin'i Nathan Redmond. Credit to Pinterest sy Birmingham Post.
Demarai Grey Childhood Story Plus Untold Biography Facts- Road to Fame
Ny Blaogana, miontana ary sambatra dia nanohy ny vatsim-pianarana baolina kitra hatramin'ny 2012. Ny fahombiazany tamin'ny vanim-potoana manaraka (2013-2014) no nahazoany ny Akademian'ny Akademian'ny klioba momba ny loka Season.
Làlana mankany Demarai Grey (nahazoan-dàlana ho an'ny BBC)
Tamin'io vanim-potoana io ihany koa dia nanatri-maso an'i Gray ny fampiroboroboana ny ekipa voalohany ao Birmingham izay nanombohany nifaninana mba ho lasa fanombohana.
Demarai Grey Childhood Story Plus Untold Biography Facts- Mitsangàna mba ho ankizilahy
Raha tao amin'ny ekipa voalohany tao Birmingham, Grey dia nanomboka nifaninana tamin'ny andraikitra voalohany tamin'ny ekipa teo aloha United Federico Macheda. Ara-panatanjahan-tena mahasalama izay nahita an'i Gray nipoitra ary nahatonga an'i Macheda nandao ny klioba.
Fotoana izao no nanamafisan'ny fitantanana ny klioban'ny Birmingham ny finoana fa nitombo ny fahamatorana. Grey dia nanoratra ny vanim-potoana 2014-2015 izay nahitana azy nandresy telo trakitra namely; Mpilalao baolina kitra Young Player ho an'ny volana desambra 2014, Birmingham City Goal ary mpilalao amin'ny 2014-2015 Season.
Ny klioba sy ny fahaiza-manaony amin'ny fiarovana amin'ny fiarovana an'i Gray dia tsy nijerijery ireo mpitsoa-ponenana mpilalao lefitry ny Premier League any Leicester City izay nanatsara ny famotsorana azy. Grey dia nanatevin-daharana ny Champions League tamin'ny 4th ny volana Janoary 2016 ary nanampy ireo mpiara-miasa aminy tamin'ny fiarovana ny satroboninahitra Premier League.
Demarai Grey dia nandrombaka ny Premier League Holders (Credit to PremierLeague)
Demarai Grey Childhood Story Plus Untold Biography Facts- Relationship Life
Iza moa ny Dating Dating Demarai?
Demarai Grey's Girlfriend- The Facts Untold (Credit to Instagram)
Ny vondrona miafina mety amin'ny Gray dia iray izay tsy afa-misaraka amin'ny mason'ny daholobe fotsiny satria ny fiainam-pitiavany dia tena tsy misy ary mety tsy misy fepetra. Grey toy ny tamin'ny fotoana nanoratana dia nanapa-kevitra ny tsy hampahafantatra ny fampahalalam-baovao momba ny fifandraisany amin'ny fiainana.
Nametraka fangatahana fanadihadiana izy indray mandeha mba hamaly fanontaniana iray momba ny fitaovan'ny vadiny. Ity ambany ity ny fivoriana fanadihadiana.
Demarai Grey Childhood Story Plus Untold Biography Facts- Untold Facts
Ny andro Demarai Grey mamono ny fahafatesana:
Fantatrao ve?… Demarai Grey indray dia nanafintohina ny fahafatesana taorian'ny nipoahan'izy mivady akaiky ny helikoptera nandritra ny diany ho an'ny Loka PA an'ny Leicester City.
Ny andro namonoana an'i Demarai Grey (Credit to FameFlynet.uk.com)
Noho ny herin'ny rivotra, ny Jamaikanina Britanika dia nentina toy ny hoe nandeha an-tongotra tao anatin'io randran-tsofoka io izy. Ny fidirana haingana nataon'ny mpiasan'ny Helicopter dia nanampy tamin'ny fisorohana ny loza tsy nampoizina. Jereo ny zava-nitranga video.
Nanaisotra an'i Lethal Hippy Crack indray izy:
Ny tranga dia nitranga taorian 'ny nandresena ny ligy voalohany tao Leicester ho an'i Everton. Io no fotoana nilalaovan'ny mpilalao baolina kitra any Birmingham ka nahatonga azy ho nanintona ny oksidina nitroka azo antoka, antsoina hoe 'hippy crack'.
Demarai Gray dia mihetsika amin'ny filaharan'ny hippy Crack (Credit to Mirror)
Grey taorian'ny nanentanana ny voka-dratsiny dia nanapa-kevitra ny hamoaka ilay lahatsary mampihomehy ao amin'ny Snapchat.
Na izany aza, dia ara-dalàna ny hahatongavana any amin'ny avo indrindra dia ny BIT masoivoho britanika no nampitandrina fa tsy mahasalama ny atidohan'ny oksizenina ny fisian'ny gazy ary mety hamono.
Demarai Grey Childhood Story Plus Untold Biography Facts- Lifestyle
Raha fantatrao ny fomba fiainan'i Demarai Grey avy eny amin'ny toerana dia azo antoka fa hanampy amin'ny fananganana sary feno azy.
Araka ny Mirror, Nandrombaka ny loha-laharana Premier League niaraka tamin'ny Lambo mainty i Demarai Grey mpandresy nandritry ny Premier League.
Tsy izy no karazan'ny mpilalao baolina kitra izay miaina ny Lavish Lifestyle mora hita avy amin'ny fiara maro be sy mahavariana.
Demarai Grey Childhood Story Plus Untold Biography Facts- Fiainana manokana
Na dia tsy maintsy novakianao momba ny hadisoana sy ny helikopteran'ny helikoptera aza. Fa ny fahafantaranao ny fiainana manokana an'i Demarai Gray dia hanampy anao hahazo sary feno azy. Alohan'ny handehanantsika dia avelao ny fanontaniana.
Karazana karazana inona no tonga ao an-tsainao rehefa mieritreritra ny mpilalao baolina matihanina amin'ny androany ianao?
Mety hieritreritra momba ny toetran'ny olona ianao. Fa Demarai Grey dia olona tia am-pitiavana izay tia ny hampiasa ny fotoanany sy ny volany amin'ny fametrahana an'ity tontolo ity ho toerana tsara kokoa.
Ny maha-olona an'i Demarai Gray (Credit to Instagram)
Grey dia nirotsaka tamina asa asa soa foana. Izy dia anisan'ireo izay mametraka vola ho an'ny hopitaly ho an'ny ankizy sy ny fitiavana hitsidika ny marary. Fotoana vitsy monja mialohan'ny handehanany ambasadera UNICEF UK.
MIEZAHA HAHAY: Misaotra ny famakiana ny tantaram-pitiavan'i Demarai Grey momba ny tantaram-pitiavana bebe kokoa momba ny tantaram-piainana tsy fantatra. amin'ny LifeBogger, Miezaka izahay mba hanana ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mety, dia zarao aminay ny fanehoan-kevitra eto ambany. Hanome voninahitra sy hanaja ny hevitrao foana izahay.